Izikole eziyi-8 Culinary eLouisiana| Izimali kanye Nemininingwane 2022
Umhlahlandlela Wokufunda Kwelinye Izwe
Izikole eziyi-8 Culinary eLouisiana| Izimali kanye Nemininingwane
Kwangathi 19, 2022 Eze James
Izikole zeCulinary eLouisiana zibe isisekelo sabantu abaningi abaqale umsebenzi womkhakha wezokupheka noma wezinsiza zokudla njengoba befundisa konke okudingekayo ukuze baqale uhambo embonini yezinsizakalo zokudla. Ngakho-ke, uma unentshisekelo ngezikole zeCulinary eLouisiana, ngiyakunxusa ukuthi uhlale unamathele kulokhu okuthunyelwe.
Uma ngimaka lokhu okuthunyelwe “Okufanele kufundwe” kulabo abathanda izikole zokupheka e-Louisiana, angihleki neze. Into eyodwa engihlale ngeluleka ngayo labo abafunda i-niche yokudlela noma izikole zokupheka ukuthi kufanele bafunde konke mayelana nokudla abangahlangana nakho, bafunde kubapheki abangochwepheshe abake baba kulo mkhakha, futhi baze basebenzise izifundo eziku-inthanethi ezifana izifundo zokupheka zamahhala eziku-inthanethi ezinezitifiketi ukuthola ulwazi olwengeziwe.
Njengomuntu onentshisekelo embonini yokudla, uke wacabanga ukuthi uzibandakanya kanjani khulula amakilasi okubhaka ku-inthanethi kuzosiza ekwandiseni ulwazi lwakho embonini yezokupheka? Kuthiwani lapho ufunda ukugcina inhlanzeko yokudla efanele, futhi uqinisekise impilo enhle ngokuthatha izifundo zokuphepha kokudla online? Ngicela wenze njalo uma ungakakwenzi lokho.
Ngenkathi kukhona 22 Izikole zaseGeorgia, 65 izikole zokupheka eCalifornia, iLouisiana inezikole eziningi ezinhle kakhulu zokupheka ezinezinhlelo ezingaqedwa ungakapheli unyaka noma emibili kuye ngokuthi usibhalisele.
Ngabantu ababalelwa ezigidini ezi-4.665 ngokusho kwe- I-United States Census Bureau, okuhlanganisa kokubili abahlali, izivakashi, kanye nezivakashi ezingena ezindaweni zokudlela ezisezingeni eliphezulu njengeretshurenti ye-RAW, i-Verona Italian Ristorante, i-Tommy's On Thomas, nezinye eziningi, kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-Louisiana iyazisa imboni yokudla kahle, futhi nawe uphumelele lapho, kufanele uhluke futhi usungule ukupheka kwakho.
Isilinganiso sezindleko zokufunda kwesinye sezikole zase-Louisiana singama- $4,515 kanti ama- $2,155 iyinani elijwayelekile lemali yokufunda ongayithola. Bheka lesi sihloko ku izikole zaseFlorida uma unesithakazelo.
Manje, kunezidingo ezithile ezidingekayo esikoleni sokupheka. Yize izidingo zihluka esikoleni ngasinye, njengezidingo ze izikole Culinary e Miami zihlukile kune eMissouri, zisekhona izidingo ezijwayelekile noma eziyisisekelo izikole eziningi zokupheka uma kungezona zonke ezizocela. Ngezansi ezinye zazo:
Kufanele ngabe usuqedile esikoleni sakho esiphakeme futhi ulungele ukwethula izitifiketi zesikole samabanga aphezulu, imibhalo esemthethweni, i-GED, i-HISET, imibhalo yokulingana kwesikole esiphakeme, njll.
Kufanele ukhokhe imali engabuyi engu-$25. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi kwezinye izikole, kungaba ngaphezulu noma ngaphansi futhi kungase kungadingeki kwezinye izikole.
Kufanele unikeze izincwadi zakho eziyizethenjwa amakhadi kamazisi avumelekile.
Kumele bhala bese uhambisa indaba yakho
Kufanele ube nekhadi lemvume yokufunda noma i-visa yabafundi yabafundi bamazwe aphesheya.
Isikolo sakho sokuhlolwa kobuchule okufana ne-IELTS noma i-TOEFL yesiNgisi, i-DELE yolimi lwesi-Spanish, i-DELF noma i-DALF yesiFulentshi, kanye ne-DSH, i-OSD, i-TELF, ne-TestDAF yolimi lwesiJalimane kufanele ihanjiswe. Qaphela futhi ukuthi akuzona zonke izikole zokupheka ezidinga lokhu.
Ngemva kokubona izidingo ezijwayelekile zokubhalisa esikoleni sokufundela ukudla, manje ake sithuthele ezikoleni zokupheka eLouisiana futhi sibone ukuthi kuhlanganisani.
Izikole ZaseCulinary eLouisiana
1. I-Louisiana Culinary Institute
6. Ikolishi Lomphakathi laseNingizimu Louisiana
8. Ikolishi Lomphakathi laseDelgado
Ngezansi kunezikole zokupheka eLouisiana. Ihlanganiswe ngokucophelela, kanye nemininingwane yabo njengobude besikhathi sohlelo, izindleko, izidingo zokwamukelwa, njll. Ngiyaninxusa ukuba niyilandele ngokucophelela.
ILouisiana Culinary Institute ingesinye sezikole zokupheka eLouisiana esihlose ukunikeza abafundi imfundo eyanele yokupheka nokubalungiselela imisebenzi yezokupheka kanye nokuthuthukela emkhakheni wokupheka.
Isikhungo esise-Baton Rouge sinezinhlelo ezintathu zokupheka okuwukubhaka namakhekhe, ubuciko bokupheka, ukungenisa izihambi, nokuphathwa kwezokupheka, futhi lapho sebeqedile, abafundi baklonyeliswa nge-AOS noma i-BS degree kwezobuciko bokupheka.
Isikole siphinde sibe namakhishi ezindawo zokudlela kanye namaphrojekthi lapho kwenziwa khona okusebenzayo ukuze kuhambisane nemibono kanye nokulungiselela abafundi abaqhubekayo ngokomsebenzi. Ubude besikhathi sohlelo cishe iminyaka emi-2, kanti izindleko ezijwayelekile zemfundo zilinganiselwa ku- $14000 - $15000.
Izidingo zohlelo zimi kanje:
Kufanele ubonise ubufakazi bokuphothula esikoleni esiphakeme noma okufanayo. Imibhalo eyamukelekayo yobufakazi yilena: idiploma yesikole samabanga aphezulu, imibhalo yesikole samabanga aphezulu (esemthethweni), i-GED, i-HISET, imibhalo yokulingana esikoleni samabanga aphezulu, noma isitifiketi esaziwayo sesikole sasekhaya.
Kufanele ukhokhe imali engabuyi engu-$25.00 ngenkathi wenza isicelo sakho.
Kufanele unikeze izinhlamvu ezintathu eziyizethenjwa mayelana nabalingiswa bakho abangochwepheshe.
Kufanele ubhale futhi uhambise indaba yakho esho inhloso yakho yokuba neziqu kwezobuciko beCulinary. I-eseyi yakho kufanele ibe ngamagama angama-500- 750.
Kufanele uhlale futhi uqedele ukuhlolwa kwezibalo zeCulinary ezakhiwe yisikhungo saseLouisiana Culinary.
Kufanele ulungele inhlolokhono nephaneli yokwamukelwa.
Kufanele uthathe futhi uphumelele isivivinyo esiyisisekelo se-Wonderlic uma ungenayo i-associate degree noma imibhalo esemthethweni yasekolishi esho ibanga okungenani lika-“C” esifundweni se-Math noma sesiNgisi sasekolishi.
Kufanele unikeze ubufakazi bokuba yisakhamuzi usebenzisa izinhlobo ezimbili zokuhlonza. Umuntu kufanele kube umazisi wesithombe njengesitifiketi sokuzalwa, ilayisense yokushayela, ikhadi lokuvikela umphakathi, ipasipoti, njll.
Lapho usungenile ohlelweni, kudingeka ukubhaliswa kwe-$75.00.
I-Sowela Technical Community College iphinde ibe ngesinye sezikole ezihlonishwayo zokupheka e-Louisiana esihlomisa abafundi ngakho konke okudingekayo ukuze baqale umsebenzi wokupheka okuthi lapho beqeda, bathole iziqu ze-AAS noma idiploma kwezobuciko bokupheka.
Isikhungo esitholakala echibini likaCharles sigunyazwe umfelandawonye wezokupheka waseMelika futhi sifaka izindawo ezifana nokudla kwesifunda, izimiso zokukhiqiza endaweni yokudlela, umsoco, izinsiza zegumbi lokudlela, njll. emsebenzini wabo wezifundo.
Uhlelo lungaqedwa cishe eminyakeni emibili yokufunda ngokugcwele, kanti izindleko ezijwayelekile zemfundo ngu-$2371. Izidingo zohlelo zimi kanje:
Kufanele ukhethe uhlelo lwakho lokufunda futhi ufake isicelo sokwamukelwa ku-inthanethi.
Kufanele ubonise ubufakazi bokugoma.
Kufanele ubonise ubufakazi bokubhaliswa ngesevisi ekhethiwe.
Kufanele ubuyekeze uhlu lokuhlola olusha lomfundi bese uhambisa zonke izinto ezidingekayo.
Kufanele wenze ukuhlolwa kokubekwa kwe-SOWELA noma uhambise izikolo zakho ezisemthethweni ze-ACT noma ze-SAT.
Ungafaka isicelo sosizo lwezezimali noma imifundaze.
Kufanele uhambele i-orientation futhi uhlangane nomeluleki wezemfundo.
Kufanele ukhokhele amakilasi futhi uthenge izincwadi zakho.
Ikolishi lomphakathi lesifunda saseBossier liphakathi kwezikole zokupheka eLouisiana ezihlomisa abafundi ngolwazi kanye namakhono okusebenzisa ukuzijwayeza abapheki abangochwepheshe, hhayi nje ezikhundleni zokungena, kodwa ezikhundleni ezithuthukile ngempumelelo.
Isikhungo esise-Bossier City sinikeza i-Associate of Applied Science degree kwezobuciko bezobuciko lapho kuphothulwa uhlelo. Isilabhasi inqamula ukuqonda okuyisisekelo kwezibalo njengokuhlobene nomsebenzi wobuciko bokupheka, ukusetshenziswa kwezimiso zokulungiselela ukudla njengezisekelo zokulungiselela ukudla, ukukhucululwa kwendle, ukuhlela imenyu, isevisi yegumbi lokudlela, njll.
Uhlelo lungaqedwa ngaphansi kwamasemesta amane noma iminyaka emibili, kanti izindleko ezijwayelekile zemfundo yi-$2,371. Uhlolojikelele lwezidingo zohlelo lungabonakala lapha
I-Nicholls State University ngokusebenzisa i-Chef John Folse Culinary Institute iphinde ibe ngesinye sezikole zokupheka e-Louisiana enikeza ukuqeqeshwa okujulile kwezobuciko bezobuciko kanye nezindawo kuyo yonke imisebenzi yezokupheka, i-patisserie, isevisi nokuphathwa kwebhizinisi, ucwaningo nentuthuko, njll.
Isikhungo esiseThibodaux sinesilinganiso esingu-16:1 somfundi nothisha ezindaweni zasekhishini ukuze siqinisekise ukuthi abafundi bathole izifundo ezanele zomuntu ngamunye nothisha walebhu. Kuphinde kube nethuba lokuthi izitshudeni zisebenze endaweni yokudlela ephethwe abafundi eyaziwa ngeLeBistro eCarmel Inn.
Lokhu okokulungiselela abafundi ukuthi babhekane nezindima embonini yezokupheka noma yenkonzo yokudla. Ubude besikhathi sohlelo cishe iminyaka emi-4 futhi izindleko zemali yokufunda yi- $3,924. Izidingo zohlelo zimi kanje:
Kufanele ube nediploma yesikole samabanga aphezulu noma i-GED
Kufanele uhambise imibhalo yakho esemthethweni yesikole samabanga aphezulu noma okulinganayo.
Kufanele uhambise izikolo zakho zokuhlolwa ze-ACT noma ze-SAT
Uma uneminyaka engaphezu kwengama-25 ngesikhathi sokufaka isicelo, kufanele ufake isicelo semfundo yabadala.
Ikolishi laseNunez Community lingesinye sezikole eziphezulu zokupheka eLouisiana esinikeza ukuqeqeshwa okujulile kubafundi abafuna ukuba nebhizinisi labo lemboni yokudla, futhi babe nobuchule bemiqondo nezinqubo zokukhucululwa kwendle kwenkonzo yokudla.
Isikhungo esise-Chalmette sihlinzeka ngohlelo lwezamabhizinisi okupheka oluhlanganisa izindawo ezinjengokubhaka, ukulawulwa kwezindleko, ukukhucululwa kwendle, ukugadwa, njll., futhi lapho beqeda siklomelisa abafundi i-Associate of Applied Science degree kwezobuciko bokupheka.
Ubude besikhathi sohlelo cishe iminyaka emibili kanti izindleko ezijwayelekile zemfundo yi-$2,371. Izidingo zohlelo zimi kanje:
Kufanele ugcwalise futhi uthumele isicelo sokwamukelwa
Kufanele wethule imibhalo yakho yesikole samabanga aphezulu noma imibhalo esemthethweni.
Kufanele uhambise izikolo zakho ze-ACT noma ze-SAT.
Kufanele unikeze ubufakazi bokugoma.
Kufanele unikeze ubufakazi bendawo yokuhlala futhi uhambele i-orientation.
ISouth Louisiana Community College iphinde ibe phakathi kwezikole zaseLouisiana ezilungiselela abafundi embonini yezokupheka noma yezokudla ngokomsebenzi.
Isikhungo esiseLafayette sinikeza abafundi amathuba okufunda mayelana neresiphi nokuhlela imenyu, ukulungisa nokupheka ukudla, ukugada nokuqeqesha abasizi basekhishini, ukuphathwa kwempahla yokudla nezinsiza zasekhishini, kanye nokukwazi ukuphatha anhlobonhlobo zokupheka nezindlela zokupheka.
Lapho sebeqedile, abafundi bangathola iziqu ze-associate noma idiploma yezobuchwepheshe ohlelweni. Isikhathi sohlelo cishe iminyaka emibili futhi ukubuka konke kwezindleko ezijwayelekile zezimali zokufunda kungabonakala lapha
Kufanele ngabe usuqedile esikoleni esiphakeme noma uthole okulinganayo okufana ne-GED noma i-HISET
Kufanele unikeze amarekhodi okugoma
Kufanele unikeze ikhophi yombhalo wakho wesikole esiphakeme ohunyushelwe esiNgisini.
Kufanele uhambise umbiko wesikolo osemthethweni we-TOEFL noma we-IELTS.
Kufanele unikeze ipasipoti yakho kanye nekhophi ye-visa yakho
Kufanele unikeze amafomu okudlulisa angu-1- 20 asuka emakolishi adlule owawafunda uma edingeka.
INorthshore Technical Community College nayo ingesinye sezikole zaseLouisiana esihlose ukufundisa abafundi ukuthi babe ochwepheshe bezokupheka abaqeqeshwe kakhulu besebenzisa ulwazi lwethiyori nolungokoqobo.
Isikhungo esiseGreensburg sihlola umkhakha wenkonzo yokudla, ubuciko bezokupheka, kanye nomkhakha wokungenisa izihambi okuthi uma usuqedile usize abafundi ukuthi bahlukanise ukuhlukahluka kwamazwe ngamazwe, umlando, nokuvela kobuciko bokupheka kanye nemigomo yokuhlonza ukudla.
Ubude besikhathi sohlelo cishe iminyaka emibili futhi kufanele luqedwe okungenani ngephuzu lebanga elithi “C” noma isilinganiso esingu-2.0 noma ngaphezulu kuwo wonke umsebenzi wezifundo osebenzayo. Izindleko ezijwayelekile zemfundo yi-$2,371.
Izidingo zohlelo azizange zishiwo, nokho, ukuvakashela iwebhusayithi njalo uma kwenzeka izibuyekezo ziyanconywa.
Ikolishi lomphakathi laseDelgado liphinde libe phakathi kwezikole ezihlonishwayo zokupheka eLouisiana ezihlomisa abafundi ngamakhono ajulile nolwazi lobuciko bezobuciko ngokusebenzisa ulwazi lwethiyori nolusebenzayo ngokulandelana.
Isikhungo esiseNew Orleans silungiselela abafundi ukuqashwa emisebenzini esezingeni lokungena futhi bathuthuke embonini yezinsiza zokudla. Lolu hlelo lugxile ekuqeqesheni umsebenzi wabapheki, ukuphekela ukudla, ukulungisa ukudla kanye nobuciko bekhekhe.
Ubude besikhathi sohlelo cishe iminyaka emibili kanti izindleko ezijwayelekile zemfundo zilinganiselwa ku-$2371. Izidingo zohlelo zimi kanje:
Kufanele ube neminyaka eyi-18; imibhalo iyadingeka.
Kufanele ugcwalise ngempumelelo futhi uthumele isicelo sobuciko bokupheka
Kufanele unikeze izinhlamvu ezimbili eziyinkomba
Kufanele unikeze imibhalo yesikole samabanga aphezulu noma imibhalo esemthethweni efanayo
Kufanele ukuthi ungeniswe eDelgado
Kufanele uhambise izikolo zakho zokuhlolwa ze-ACT.
Kufanele ube nokukhulu okulungile ohlwini kusistimu yesibhengezo.
Kufanele ulungele inhlolokhono yobuhlakani
Kufanele ulungele ukubhalisela i-ENGL 101 noma i-ENLG 110 kanye ne-MATH 098 njengoba kunqunywa imibhalo yakho yasekolishi noma izivivinyo zokubeka i-Delgado.
Kufanele uhambele inhlolokhono yomqondisi wohlelo.
Njengamanje, ngingasho ukuthi noma ngubani onentshisekelo yezikole zeCulinary eLouisiana uhlonyiswe ngazo zonke izikhali ezidingekayo ukuze afake izicelo zanoma iziphi izikole zokupheka eLouisiana ngenhla. Ngikholwa futhi ukuthi uma ulandela imihlahlandlela nezinyathelo ezinconyiwe ngenhla, ukwamukelwa kwakho kuqinisekile.
Ungakwazi futhi ukubheka isihloko sethu ku izikole zokupheka e-Alabama uma unesithakazelo.
Ngikufisela inhlanhla njengoba ufaka isicelo!
Izikole Zokufundela e-Houston | Izimali kanye Nemininingwane
Izikole Zokufundela e-Vermont | Izimali kanye Nemininingwane
Izikole Zokudla eRhode Island | Izimali kanye Nemininingwane
Izikole Eziphezulu Zokudla e-Oregon | Izimali, kanye Nemininingwane
Izikole Ezinhle Kakhulu Zokudla eTexas | Izimali kanye Nemininingwane
Izikole Ezinhle Kakhulu Zokudla e-Arizona | Izimali kanye Nemininingwane
Izikole Zokufundela eMaryland | Izimali, kanye Nemininingwane
Post Previous:Izikole Ezinhle Kakhulu Eziyisi-7 e-Houston | Izimali kanye Nemininingwane
Post Next:Ukusungulwa Kwezobuchwepheshe Kwekhulunyaka Lama-21 Kuthinta Ezokuzijabulisa Nezokudlala Umhlaba